Enwere m ike Naghachi foto site na Eye-Fi SD Kaadị?
Usoro Eye-Fi SD Kaadị Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
1 Enwere m ike Naghachi foto site na Eye-Fi SD Kaadị?
M nwere Canon 60D igwefoto dijitalụ. M na-eji a 4GB Eye-Fi Pro X2 kaadị ebe nchekwa na ya. Ụnyaahụ mgbe m wee photos na igwefoto dijitalụ m, m nwetara ozi "na kaadị ebe nchekwa njehie". Mgbe ahụ, m na-agbalị ejikọta anya m-Fi SD kaadị na kọmputa m, a gwara m na kaadị mkpa ka-Ị. Ma m nwere ike ime otú ahụ. Ozugbo m formatted ya, foto niile echekwara na ọ ga-ewepụ. Ọ bụ kwe m omume na-agbake foto site na Eye-Fi SD kaadị?
Anya-Fi SD kaadị bụ a pụrụ iche nchekwa na ngwaọrụ na-enye gị na-echekwa data nakwa dị ka transfer echekwara faịlụ gị na kọmputa na Wi-Fi. Ezie na ọ bụ nnọọ adaba, faịlụ na ya ka nwere ike ga-efu n'ihi kaadị njehie, nhichapụ, kaadị formatting na ọbụna na-ezighị ezi na ime ihe. Nke bụ eziokwu bụ, gị foto ndị ka na gị Eye-Fi SD kaadị dị ka ogologo oge dị ka i na-adịghị mere ọ bụla ojiji nke ya. Ya mere, unu nwere ike inyeaka a ntakịrị na anya n'ihi na a-atọ ndị ọzọ Eye-Fi SD kaadị data mgbake na Internet inyere gị aka.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ gị zuru okè ngwọta naghachi Eye-Fi SD kaadị data. Files furu efu n'ihi ihe mere ka nhichapụ, kaadị njehie, kaadị formatting nwere ike mfe Ewepụtara na a magburu onwe usoro. Ị ga-enwe ike gbapụta furu efu foto, vidiyo, ọdịyo faịlụ na ndị ọzọ si na anya gị na-Fi SD kaadị na mfe na n'ihe ize ndụ-free ụzọ na ngwá ọrụ a.
2 Usoro Eye-Fi SD Kaadị Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
Aga m naghachi Eye-Fi SD kaadị data na Windows mbipute a usoro. Mac ọrụ pụrụ ịgbaso yiri arụmọrụ na na na Mac version ime mgbake.
Nzọụkwụ 1 Họrọ mgbake mode na-amalite Eye-Fi SD kaadị data mgbake
Ebe a, na-agbake ehichapụ ma ọ bụ formatted faịlụ site na gị Eye-Fi SD kaadị, ị nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode dị ka a mbụ na-agbalị.
Cheta na: Biko ahụ jikọọ gị Eye-Fi SD kaadị na kọmputa gị na-eme n'aka na ọ ga-ghọtara dị ka a mbanye.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị Eye-Fi SD kaadị ịchọta furu efu faịlụ
Ugbu a ị ga-họrọ gị Eye-Fi SD kaadị na pịa "Malite" bọtịnụ na window na-amalite ịgụ isiokwu furu efu faịlụ na ya.
Naghachi data si a formatted Eye-Fi SD kaadị, ị nwere ike họrọ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3 Naghachi foto site na Eye-Fi SD kaadị
N'ikpeazụ, niile recoverable faịlụ gị Eye-Fi SD kaadị ga-egosipụta na windo mgbe ịgụ isiokwu. Ịnwere ike ihuchalu foto ego otú ọtụtụ gị furu efu photos nwere ike ịbụ mgbake.
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa iji họrọ foto ma ọ bụ ndị ọzọ faịlụ ị chọrọ iji naghachi na pịa "Naghachi" button na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Cheta na: Unu ịzọpụta natara faịlụ azụ gị Eye-Fi SD kaadị n'oge mgbake.
> Resource> Naghachi> Olee otú iji Igosi Eye-Fi SD Kaadị Data Recovery